पुरुष डाक्टरप्रति विश्वास बढ्दो - विशेष - नारी
डा. अतीत पौडेल, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, भक्तपुर अस्पताल
महिलाको डाक्टर बन्ने सोच
पोखरामा प्लस टुसम्म अध्ययन गरेपछि उनले भरतपुरबाट एमबीबीएस गरे । मुस्ताङमा बसेर काम गर्दा कतिपय महिलाको प्रसवमा साल अड्किएको, पीडाले छटपटाएको देखेपछि त्यही समयमा उनले गाइनोमा विशेषज्ञता हासिल गर्ने सोच बनाएका थिए । त्रिभुवन शिक्षण अस्पतालमा अध्ययनका क्रममा धेरै साथीले पुरुष पनि महिलाको डाक्टर बन्न लाग्यो भनेर उनको खिसी गर्थे ।
महिलाको क्षेत्रमा काम गर्दाका सजिला–अप्ठ्यारा
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञका रूपमा काम गर्दा पहिलेको जस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छैन । पहिले महिलाहरू आफ्नो रोग लुकाउँथे, जँचाउन आए पनि खुलेर आफ्नो स्वास्थ्य समस्या व्यक्त गर्न सक्दैनथे । अहिले त्यो स्थितिमा परिवर्तन आएको छ । महिलाहरू निर्धक्क आफ्नो समस्या भन्छन् । अझ गम्भीर अवस्थामा वा बोल्ड डिसिजन लिनुपरे उनीहरूले पुरुष चिकित्सकलाई नै रोज्ने गरेका छन् । अप्रेसन वा अन्य उपचारका लागि पुरुष चिकित्सक भए ढुक्क हुन्छ जस्तो गर्छन् । उनीहरूको पहिलो रोजाइ नै पुरुष गाइनोकोलोजिस्ट हुने गरेका छन् ।
महिलामा देखिने मुख्य समस्या
नेपाली महिलामा खासगरी तल्लो पेट दुख्ने, सेतो पानी बग्ने, महिनावारीको समयमा धेरै रगत बग्ने आदि समस्या देखा पर्छन् ।
आफूले हेरेका बिरामी निको भएर घर फर्कदा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ । भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत हुँदा मुग्लिनको बाटो बिग्रिएको थियो । धेरै महिला बिरामीलाई त्यहाँ उपचारका लागि ल्याइन्थ्यो । अष्टमीका दिन गोरखाकी एउटी महिलाको पाठेघर प्रसव पीडाका कारण फुट्यो । त्यो अवस्थामा मैले रिस्क मोलेर अप्रेसन गरी बच्चा निकालेको थिएँ । पछि आमा र बच्चा दुवै बाँचे । यस्ता धेरै घटना छन् । अस्पतालमा आएका बिरामी उपचारपछि बिसेक भएर खुसी हुँदै घर फर्कदा आनन्द महसुस हुन्छ ।
नेपाली महिलाहरू आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कति सचेत ?
शिक्षा तथा जनचेतनाका कारण पनि महिलाहरू अहिले आफ्नो स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुन थालेका छन् । पहिले रोगले विकराल रूप लिएपछि मात्र अस्पताल आउँथे भने अहिले केही हुनासाथ तुरुन्त अस्पताल आइहाल्छन् । यसैगरी ग्रामीण भेगका क्याम्पमा आङ खस्ने समस्याको अप्रेसन गराएका हजुरआमाहरू रिङ फेर्न तथा फलोअपका लागि नातिनीका साथ अस्पताल आउँछन् ।
आफ्नै परिवारको चेकअप
मैले आफ्नो परिवारमा कसैको उपचार गरेको छैन । श्रीमतीको डेलिभरीमा सँगै अस्पतालसम्म गएँ । स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ भएकाले सरसल्लाह भने दिन्थें तर आफूले भने उपचार गरिन ।
महिलालाई स्वास्थ्य सुझाव
अहिलेको जीवनशैली, खानपान तथा रहनसहनका कारण पनि रोगले समात्छ । त्यसैले समयमै उपचार गराउनुपर्छ । दिनहुँ नियमित रूपमा केही समय व्यायाम गर्नुपर्छ । फास्टफुड तथा चिल्ला खानेकुरा खानुहुँदैन । अहिले अनावश्यक गर्भपतन गर्ने ट्रेन्ड बढेको छ । यसरी बढी गर्भपतन गराउनुभन्दा गर्भनिरोधक साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । वर्ष–दुई वर्षको अन्तरालमा नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउनुपर्छ ।
बेबी सावरको बढ्दो ट्रेन्ड मंसिर २४, २०७६
यमपञ्चकका पाँच मान्यता कार्तिक १०, २०७६
उपयोगी ड्राइफ्रुट्स कार्तिक ९, २०७६
धन भित्र्याउने धनतेरस कार्तिक ८, २०७६
तिहारमा रंगोली कार्तिक ८, २०७६
तिहारलाई कसरी स्वास्थ्यमैत्री एवं वातावरणमैत्री बनाउने ? कार्तिक ७, २०७६